Akụkọ - Ihe mkpuchi polymer nke na-eme ka ụlọ dị jụụ
Ndị Injinia azụlitela PDRC nke dị elu na-eme ka ikuku jụrụ oyi na-adị oyi) mkpuchi polymer nwere oghere ikuku sitere na nanometers na miniscels nke enwere ike iji dị ka ikuku ikuku na-enweghị atụ maka ụlọ elu, ụlọ, tankị mmiri, ụgbọ ala na ọbụna ụgbọelu - ihe ọ bụla nwere ike Ha jiri usoro ntụgharị ihe eji eme ihe iji nye polymer ka ọ bụrụ ụdị ụfụfụ. Mgbe ekpughere ya na mbara igwe, ihe mkpuchi PDRC polymer na-egosipụta ìhè anyanwụ ma na-ekpo ọkụ iji nweta ọnọdụ okpomọkụ dị ala karịa ihe eji ewu ụlọ ma ọ bụ ọbụlagodi gburugburu. ikuku.
Ebe okpomoku na ebili okpomoku na emebi ndu mmadu n’uwa nile, ihe ichoro ajuju na-adiwanye mkpa. nhazi, dị oke ọnụ, jiri ike dị ukwuu, chọrọ ịnweta ọkụ eletrik dị njikere, ma na-achọkarị ntụ oyi ma ọ bụ nke griinụ.
Uzo ozo nke usoro ume ndia di ike bu PDRC, ihe omuma nke ebe ikuku di nwayo site na igosiputa ìhè anyanwu na ichota oku nye ikuku oyi. Oburu na elu ala nwere ihe ngosi nke anyanwu (R) nwere ike ibelata mmụba nke anwụ, na na oke onu ogugu nke oku (Ɛ) nwere ike ime ka elu igwe nke ikuku oku di elu, PDRC kachasi nma.Ọ bụrụ na R na Ɛ dị elu, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ụgbụ okpomọkụ ahụ ga-eme na anyanwụ.
Zụlite atụmatụ PDRC bara uru bụ ihe ịma aka: ọtụtụ ihe nghazi nghazi ndị a dị mgbagwoju anya ma ọ bụ dị oke ọnụ, enweghị ike itinye ya n'ọrụ ma ọ bụ tinye ya n'elu ụlọ na ụlọ nwere ụdị na textures dị iche iche. Agbanyeghị, mkpuchi na-acha ọcha na-enwekarị agba dị iche iche na-amịkọrọ ikuku ultraviolet ma ghara igosipụta ogologo ogologo ogologo ụzarị anyanwụ nke ọma, yabụ na arụmọrụ ha anaghị adị oke mma.
Ndị na-eme nchọpụta nke ụlọ ọrụ Columbia mepụtara akwa mkpuchi PDRC polymer nke dị na mpụga nke ikuku nanometer-to micron nke nwere ike iji dị ka ikuku oyi na-enweghị atụ, enwere ike ịcha ya ma tụọ ya n'elu ụlọ, ụlọ, tankị mmiri, ụgbọ ala, na ọbụna oghere - ihe ọ bụla enwere ike ịse agba.Ha jiri usoro ntụgharị usoro ihe eji eme ihe iji nye polymer ka ọ bụrụ ụdị ụfụfụ yiri mmiri.N'ihi ọdịiche dị na ndọtị ntụgharị n'etiti ikuku ikuku na polymer gbara gburugburu, ikuku ikuku na polymer porous. Polymer na-eme ka ọ dị ọcha ma si otú a na-ezere ikpo ọkụ nke anyanwụ, ebe mmetụta ya nwere na-enye ya ohere igosipụta okpomọkụ nke ọma na mbara igwe.